Ikhaya elimangalisayo le-A-Isakhelo kwi-Canyon Lake-CLEAN
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRachel
Relax kule Texas Hill Country A-Frame Cabin imangalisayo kufutshane nechibi. Uyakonwabela oku kukhululekile, kwangasese, kucocekile
ikhaya kunye nezinto ozinqwenelayo ngexesha leholide.
Iilinen ezikhululekileyo, iWiFi ekhawulezayo, ikhitshi epheleleyo, umngxuma weBBQ, iSmart TV kunye nokunye okuninzi kwenza le nkampu ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yemisebenzi yakho yeLake & River.
Nokuba uphunga ikofu entsha kusasa okanye ukonwabela iglasi yewayini ngorhatya phantsi kweSibhakabhaka saseTexas esikhulu siyakwamkela kweli khaya liyiFama yale mihla.
Eli khaya le-A-Frame lihlaziywe ngokupheleleyo ngo-2020. Isimbo siya kuchazwa ngcono njengeFama yoShishino lwangoku. Kukho izinto ezininzi ezichukumisayo ezijikeleze indlu ezenza indlu ibe yodwa njengodonga lobugcisa lwamaplanga njengoko ungena kwigumbi eliphezulu.
Kukho igumbi lokulala eliliPrayimari phezulu elinebhedi yeQueen kunye nesofa. Ezantsi kukho isofa yokulala eyindlovukazi. Sikwanayo ne-self inflating queen size air umatrasi ukuba kuyimfuneko.
Iilinen, iitawuli, imithwalo inikezelwa.
Ikhitshi ligcwele izinto zokupheka, izitya, izitya, i-blender, i-toaster, imbiza yekofu, i-microwave, i-wine opener, njl.
Kukho igumbi lokuhlambela elinye elineshawa yokuhamba ngemvula. Isepha, iShampoo, kunye neToilet Paper zigcwele.
Indlu ine-wifi ekhawulezayo, i-netflix, i-hulu. I-TV yi-smart TV, ngoko unokungena kwi-apps zakho zeTV ukuba uyathanda.
Kukho ubushushu kunye ne-AC elawulwa ziindawo ezikude zombini phezulu nasezantsi.
Ngasemva kwendlu kubandakanya umngxuma we-bbq wamalahle, kunye nezihlalo ezijikeleze umgodi womlilo, phantsi kwezibane zeentambo.
Kukho iirempu ezimbini zesikhephe ebumelwaneni, #22 ingaphantsi kweemayile enye. Indlu inendawo yokupaka eninzi yakho kunye nesikhephe sakho.
Mhlawumbi uya kubona amaxhama ebhadula eyadini ngexesha lokuhlala kwakho. Kwaye lo gama isibhakabhaka sicacile, uya kubona ukuba iinkwenkwezi ezinkulu kwaye zikhanya ngakumbi kunangaphambili njengommandla njengoko kungekho ngcoliseko yokukhanya ejikeleze ichibi.
Ukuba uyakonwabela ukuhamba, ukubaleka, okanye ukubona indawo sicebisa ukuba undwendwele i-ook park kwangentseni okanye ngorhatya ukuze uhambe ngemayile enye yedama. Uya kufumana iimbono ezimangalisayo zeenduli eziqengqelekayo kwelinye icala kunye neembono ezintle zechibi kwelinye.
4.97 · Izimvo eziyi-156
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi156
IChibi laseCanyon liphakathi kokuninzi. Zininzi kakhulu ukuba zidweliswe, kodwa nazi ezinye iimbalasane.
I-Whitewater Amphitheatre - iimayile ezili-12
Umlambo waseGuadalupe - Imisebenzi yamanzi (iTubing) - iikhilomitha ezili-12
(Imidlalo yamanzi amhlophe, iityhubhu zeShanty, iTube Haus)
Canyon Beach - 7 miles
I-Boat Ramp 22 < 1 imayile
Potters Creek Park - 2.4 yeekhilomitha
I-Jacobs Creek Park - iikhilomitha ezili-9
I-Overloook Park - iikhilomitha ezili-11
Guadalupe River Trail - 11 miles
Canyon Lake Marina & Baja Restaurant - 8 miles
I-Comal Park - iikhilomitha ezingama-20
Iidemon Backbone (scenic drive) - 10 miles
IGruene River Grill - iikhilomitha ezingama-23
IHolo yeGruene - iikhilomitha ezingama-23
Igumbi lokungcamla loMdiliya – iimayile ezingama-23
I-Boutique Shopping - 23 miles
I-Landa Park - iikhilomitha ezingama-26
Schlitterbahn - iikhilomitha ezingama-26
I-Float In & Tube Chute – iimayile ezingama-26
Wurstfest (Yonyaka)- 26 miles
7A Ranch – 18 miles
I-Blue Hole - iikhilomitha ezili-19
Jacobs Well - 17 miles
San Marcos Premium Outlet Mall - 28 miles
Umqolomba weWonderworld kunye nePaki - iimayile ezingama-24
Wildlife Ranch - 30 miles
I-Natural Bridge Caverns - iikhilomitha ezingama-30
River Walk - 46 miles
Austin – 55 miles (kakhulu kakhulu ukuba kudweliswe)
Iklabhu eRebecca Creek - iimayile ezili-9
Iklabhu yeGalufa yaseLakeside - iikhilomitha ezili-19
I-Landa Park Golf Course 25 miles
Indlela yangaphantsi, Sonic
IPizza elungileyo engendawo (ihambisa)
ITrattoria kaGennaro - iikhilomitha ezili-19
Freiheit ilizwe Store - 25 miles
Muck & Fuss - 26 miles
Salt Lick BBQ - 33 miles
Blacks BBQ - 25 miles
Moozies, Krauses Café, - 29 miles
....kunye nokunye okuninzi!
Indlu yakhiwe ngeKeyless entry. Siza kukuthumelela ikhowudi enamanani ama-4 ukuze uyisebenzise xa uhleli. Asinakuze sikubone, nangona kunjalo, ukuba unemibuzo okanye ufuna naziphi na iingcebiso malunga nommandla, siyakuvuyela ukukunceda. Sinokufumaneka ngeqonga lokuthumela imiyalezo lika-Airbnb, i-imeyile, iTeksti okanye iFowuni. Inombolo yethu iya kubonelelwa ngaphambi kokuhlala kwakho.
Indlu yakhiwe ngeKeyless entry. Siza kukuthumelela ikhowudi enamanani ama-4 ukuze uyisebenzise xa uhleli. Asinakuze sikubone, nangona kunjalo, ukuba unemibuzo okanye ufuna naziphi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Canyon Lake